परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली विदेश घुमेको घुम्यै | Diyopost - ओझेलको खबर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली विदेश घुमेको घुम्यै | Diyopost - ओझेलको खबर
Diyo post शुक्रबार, मंसिर ०७, २०७५ | ७:०५:३७
काठमाडौं, मंसिर ७ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबारमा कार्यसम्पादनबारे मन्त्रीहरूलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने जापान डुलिरहेका थिए । पाँच दिनका लागि गएका उनी टोकियो, ओसाकालगायत केही सहर घुमे ।
‘तपार्इंका मन्त्रीहरूले कतिबेला काम गर्छन्, खै ? हुन्न केही भन्दैनन्, गर्ने केही होइन । केही भन्न गयो, भ्रमणको कुरा गर्छन्’, काठमाडौंस्थित एक विदेशी नियोगका अधिकारीले भने । उपेन्द्र यादव पनि परराष्ट्रमन्त्री हुँदा खुब घुमे । उनलाई डा. प्रकाशशरण महतले पछ्याए । परराष्ट्र अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई पनि घुम्न मन लागेको हुन्छ । मन्त्रीलाई नै पठाइदिएपछि बाटो खुल्छ ।’
मन्त्रीका अगाडि कर्मचारीले मक्ख हुने गरी कुरा राख्ने चलन नौलो होइन । तर त्यसमै अल्मलिनु अनौठो हो । ‘परराष्ट्रमन्त्रीको आठ महिना अवधिमा उहाँ दुई महिना विदेश र प्लेनमा रहनुभयो’, कर्मचारीले टिप्पणी गरे ।
दुई महिना चार दिन विदेशमा रहे पनि नगई नहुने भन्ने जस्तो भ्रमण खासै छैन । परराष्ट्रमन्त्री विदेश जानुका निश्चित उद्देश्य हुनुपर्छ । तर अहिले भइरहेको भ्रमणबाट त्यस्तो केही देखिएको छैन ।
भारत र चीनबीचको सन्तुलन, पश्चिमा शक्तिको चासोको मत्थरलगायत दुईपक्षीय÷बहुपक्षीय सहकार्यका काम अघि बढाउनुपर्नेमा बाहिर मात्र दौडिने काम सुहाउँदो नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारले सुनाए ।
चैत २ मा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि उनले विदेश यात्रा अजरबैजानबाट थालेका हुन् । उनी असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठन (नाम)को मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन अजरबैजान पुगे । त्यसलगत्तै उनी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सहभागी हुन उतैबाट दिल्ली आए । दिल्लीबाट फर्केलगत्तै उनी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भन्दै बेइजिङ हान्निए ।
चीनपछि ज्ञवाली अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकको थिंक ट्यांक सम्मेलनमा सहभागी हुन मंगोलिया गए । त्यहाँबाट फर्केको एक साता नहुँदै उनी प्रधानमन्त्रीसँग चीन भ्रमणमा निस्किए । बिम्स्टेक तयारीलाई बेवास्ता गर्दै ९ दिनका लागि युरोप (पोर्चुगल, लग्जेम्बर्ग र बेल्जियम) गए ।
बिम्स्टेक सम्मेलन सकेको केही समयमा उनी पुनः युरोप गए । पहिला गएको स्थानमा पुनः दोहोर्‍याएरसमेत पुगे । भियना र बेल्जियमबाट फर्केलगत्तै उनी प्रधानमन्त्रीसँग १३ दिन अमेरिकामा रहे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग कतार गए । ज्ञवाली मन्त्री बनेपछि परराष्ट्र कर्मचारीको विदेश भ्रमण पनि बढेको छ । लामो राजनीतिक अनुभव भएका ज्ञवालीको भ्रमण मोह देखेर अन्य समकक्षी नै आश्चर्यमा छन् । चाडपर्व परेको महिना र मोदीको नेपाल भ्रमण भएको मे महिनाबाहेक सबै महिना विदेशमा छन् ।
शुक्रबार, मंसिर ०७, २०७५ | ७:०५:३७